Covid-19: Fivoaran’ny antontan’isa teto Madagasikara ny 31 oktobra hatramin’ny novambra 2020 - ewa.mg
Covid-19: Fivoaran’ny antontan’isa teto Madagasikara ny 31 oktobra hatramin’ny novambra 2020
News - Santé - Covid-19: Fivoaran’ny antontan’isa teto Madagasikara ny 31 oktobra hatramin’ny novambra 2020
#Tranga_vaovao: 122 tamin’ireo 2495 nanaovana fitiliana.
Alaotra Mangoro 19
Matsiatra Ambony 20
Vatovavy Fitovinany 8
Atsimo Andrefana 5
Cas importés 17
Alaotra Mangororo 4
Matsiatra Ambony 3
Vatovavy Fitovinany 27
Alaotra Mangoro 1
Matsiatra Ambony 1
Manentana antsika mandrakariva hanaraka ireo fepetra fototra noraisin’ny Fitondram-panjakana hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina.
L’article Covid-19: Fivoaran’ny antontan’isa teto Madagasikara ny 31 oktobra hatramin’ny novambra 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nivoaka tamin'ny : 11/11/2020
Maherin’ny 50 taona ny ankamaroan’ny tetezana eto Madagasikara hita amin’ireny lalam-pienena ireny. Misy ny nasian-panavaozana, misy tsy mihetsika mihitsy. Ny vanim-potoana anefa mivoatra hatrany, tsy mifanaraka amin’ireny fotodrafitrasa ireny intsony. Raha tany am-boalohany, taona 60 sy 70, natao hahazaka 15 t na 20 t ny tetezana hita ain’ny lalam-pirenena maro. Efa tsy izany izao ny fiara vaventy mandeha amin’ireny lalam-pirenena ireny, tsy latsaky ny 40 t izao izy ireny, toy ireo hita amin’ny lalana mankany Toamasina (RN2). Lalana 360 km, 12 ora raha haingana indrindra ny hanaovana azy, noho ny fahamaroan’ny fiara vaventy sy ny faharatsian’ny lalana. Nitombo isa ireo fiara vaventy mitatitra solika hatramin’ny lalamby tsy azo antoka na tsy nandeha intsony. Andrasana hirodana vao amboarina. Amin’ny lalana mianatsimo (RN7), tamin’ny volana septambra 2017 nirodana ny tetezana eo Vohiposa, tsy nahazaka ny fandalovan’ny fiara vaventy iray. Ny Vondrona eoropeanina no nanavotra haingana nitondra fanampiana nametraka « pont Bailey » teo fa lasan’ny rano indray izany, tamin’ny fiandohan’ity taona ity, niandrasana ny fidinan’ny rano ary nafindra toeran-kafa. Toy izany koa ny tetezan’i Manakara Be, nirodona ny taona 2012 noho ny fahanterany. Niandry famatsiam-bola avy any ivelany, ka vao tamin’ny 2017, natomboka ny fanadihadiana sy ny fanarenana azy io. Toy izany koa ny fahasimban’ny tetezan’i Mananjeba, eo anelanelan’i Ambondromamy sy Ambilobe (RN6), lalana mianavaratra. Efa natomboka ny asa fanamboarana azy, saingy nasiana fepetra izao ny fandalovana eo. Nasiam-panavaozana tanteraka kosa ny tetezan’i Bestiboka (RN4). Tetezana naorina ny taona 1927, izao izany vao vita ! Toy izany koa ny tetezan’ny Kamoro, namboarin’ny vazaha frantsay ny taona 1934, tsy nasiam-panavaozana raha tsy tamin’ny taona 2015, ka tamin’ny taon-dasa vao vita tanteraka, mifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny, nandaniana 20 tapitrisa dolara. R.Mathieu
Faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana: fotodrafitrasa lovainjafy ny famatsian-drano madio
Nahazo rano fisotro madio ireo mponina manodidina ny 10.000 any amin’ny faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana. Tanjona ny fananganana fotodrafitrasa lovainjafy. Tonga any an-tokantranon’ny olona ny rano madio.Tafiditra ao anatin’ny velirano faharoan’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina ny famatsiana rano fisotro madio ho an’ny mponina, indrindra ireo any amin’ny toerana lavitra sy ambanivohitra. Manatanteraka izany ny minisiteran’ny Rano sy fidiovana ary fahadiovana, izay tarihin’ny minisitra, Rakotovelomanantsoa Voahary sy ny ekipany.Maro ireo fotodrafitrasa famatsian-drano notokanana tany amin’ny faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana iny. Tanjona ny fananganana fotodrafitrasa lovainjafy, maharitra ary mahomby sy tena manampy ny mponina eny ifotony.Nisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny governemanta amerikana amin’ny alàlan’ny tetikasa Rano Wash an’ny USAID, tantanin’ny CARE Madagascar, sy ny minisiteran’ny Rano, ny fidiovana ary ny fidiovana miaraka amin’ny mponina eny ifotony sy ny mpiara-miombon’antoka amin’ny sehatra tsy miankina nahafahana nanao izany. Izy ireo, izay hitantana ny fotodrafitrasa, ary hiantoka azy ho lovainjafy sy hanome rano tsara kalitao hatrany.Tetikasa misahana ny rano sy ny fidiovana lehibe indrindra an’ny USAID eto Madagasikara ny Rano Wash. Maharitra dimy taona ny tetikasa, novatsin’ny fanjakana amerikana vola mitentina 30 tapitrisa dolara hahafahan’ny mponina anetsiny mahazo rano any amin’ny kaominina ambanivohitra, miisa 250 any amin’ny faritra enina eto Madagasikara (Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, Atsinanana, Matsiatra Ambony, Vakinankaratra, sy Vatovavy Fitovinany), izay ianjadian’ny tsy fisian-drano fisotro matetika. Kendrena ho mihoatra ny telo hetsy ny olona hisitraka rano fisotro madio mandra-pahatapitry ny tetikasa.“Mandroso hatrany amin’ny fanatsarana ny fahazoan-drano ho an’ny ankohonana tena mila izany ny Rano Wash, ” hoy ny talen’ny tetikasa, i Sébastien Fesneau. Ny orinasa tsy miankina eo an-toerana no nanangana ny fotodrafitrasa sy nandray anjara tamin’ny fandaniana ankapobeny.Izy ireo koa no hiantoka ny fikojakojana sy hitantana ny famatsian-drano ary hanatsara ny fahazoan-drano, ny fidiovana sy fahadiovana. Nitondra fandraisana anjara lehibe indrindra tamin’ny fananganana ny fotodrafitrasa ny Rano Wash ary miara-miasa amin’ny tompon’andraikitra eo an-tanàna manara-maso ny fitantanan’ny tsy miankina.Manan-tsafidy ny mponina na hampiasa ny tambajotra ka hampiditra rano ao an-trano na hitambatra rano amin’ny mpifanolo-bodirindrina, na haka rano eny amin’ny paompy iombonana. Miankina amin’ny safidy ataon’ny mpampiasa rano tsirairay ny vola aloa amin’izany.L’article Faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana: fotodrafitrasa lovainjafy ny famatsian-drano madio a été récupéré chez Newsmada.
Nofaohin’ny kamiao «semi-remorque» tao anaty fiolahana: potika tanteraka ilay 4×4, maty potsitra tao ny mpamily
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina indray, omaly maraina, tamin’iny lalam-pirenena faharoa iny, 12 km miala an’i Moramanga, raha hiatsinanana. Fiarakodia Toyota 4×4 iray no potika tanteraka raha nofaohin’ny kamiao “semi-remorque” tao anaty fiolahan-dalana.Niraisan’ny rehetra izay nahita fa vokatry ny tsy fitandremana tanteraka ny niteraka ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina nitranga tao Moramanga, omaly maraina, ity. Tsy misy tsy mahalala fa anisan’ny lalam-pirenena tery sady be fiolahana iny lalam-pirenena faharoa mampitohy an’Antananarivo amin’ny faritra Atsinanana iny. Tsy vitan’izay fa toerana mando lava sady ifamezivezen’ny fiarakodia maro, na andro na alina, indrindra ireo fiara vaventy mpitatitra entana sy ny taksiborosy, ny RN 2. Samy mahalala tsara izany ny mpampiasa iny lalam-pirenena faharoa iny afa-tsy ny olon-tsotra tsy za-dalana loatra angamba. Izay indrindra no heverina fa nahatonga ity lozam-pifamoivoizana nahatsiravina nitranga, omaly maraina, ity.Araka ny voalaza mantsy, nisongona ny fiara teo alohany tao anaty fiolahan-dalana ity fiara 4×4 ity. Ilay fiolahan-dalana anefa, tsy ahitana akory ny fiara mety hifanena. Mety ho efa akaiky vao hitan’ilay mpamily ilay kamiaobe nifanena aminy, saingy tsy nisy azo natao intsony. Voafaoka mafy ary potika tsy nisy noraisina, araka izao hita amin’ny sary izao, ilay fiara 4×4.Nosokirina vao tafavoaka…Noho ny fahavoazana nahazo ity 4×4 ity, voalazan’ny tatitra fa nanano sarotra ny famonjena ireo mpandeha tao anatiny. Nifarimbona nifanome tanana tamin’ny famonjena ireo mpandeha tao anatiny ny olona nahita. Nisy ireo tafavoaka hainganan ihany, ary nentina namonjy ny hopitaly ao Moramanga. Anisan’izany ny ankizikely iray naratra mafy. Naharitra ora vitsivitsy kosa ny fisokirana ilay mpamily vao tafavoaka tao anatiny, saingy efa tsy avotra intsony ny ainy.Fotoana fohy taorian’ny nitrangan’ny loza, tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana ny zandary ao Moramanga. Nezahina natao haingana koa izay nanalana ilay fiara niharan-doza tamin’ny lalana hahafahan’ny fifamoivoizana miverina amin’ny laoniny izay tapaka nandritra ny ora maromaro.Tsetsatsetra tsy aritra ihany ny ilazana fa na eo aza ny fisian’ireo mpamily mety hoe tsy za-dalana loatra, mampitaraina ny maro ihany koa ny fanararaotana ataon’ny mpamily fiara vaventy, kamiaobe mpitondra entana. Tsy vitan’ny hoe mandeha mafy fa sady manararaotra ny habeny no mibahan-dalana, tsy mitsinjo ireo fiara madinika… indrindra ao anaty fiolahan-dalana tahaka ity nitranga omaly ity.M.R. L’article Nofaohin’ny kamiao «semi-remorque» tao anaty fiolahana: potika tanteraka ilay 4×4, maty potsitra tao ny mpamily a été récupéré chez Newsmada.
Manjakaray: notokanana ny foibe mikarakara ireo niharan’ny herisetra
Notokanana amin’ny fomba ofisialy, omaly, ny ivontoerana vaovao mandray an-tanana ireo niharan’ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy ny maha vavy etsy Manjakaray.Tsy voatery mivezivezy intsony amin’ny toerana hafa ireo niharan’ny herisetra fa misy avy hatrany ny tompon’andraikitra rehetra isan-tsokajiny mikarakara ao amin’ity ivontoerana vaovao etsy Manjakaray ity.Anisan’izany ny dokotera, ny mpitsara, ny mpisolovava, ny polisy, ny zandarimariam-pirenena psychologue, ny mpanao fanadihadiana… Mifarimbona ao avokoa ireo minisitera maromaro miaraka amin’ny fikambanana Fitia sy ny masoivohon’i Norvège misa eto Madagasikara ary indrindra ny Fnuap.Hita ao amin’ity ivontoerana ity avokoa ny torolalana sy ny filankevitra rehetra ary efa eo ireo sampandraharaha mahefa misahana ny dingana rehetra tokony hatao hiarovana ilay olona niharan’ny herisetra.Ankoatra izany, misy fandriana handraisana vonjimaika ireo tratran’ny herisetra ka voaroaka tany an-tranony ihany koa ny ivontoerana etsy Manjakaray.Nilaza ny minisitry ny Mponina, i Bavy Angelica Michelle, fa tsara raha miparitaka any amin’ny faritra ny ivontoerana toy izao hiarovana indrindra ny zaza sy ny vehivavy tsy hamoy fo amin’ny herisetra miseholany ankehitriny.Raha ny salanisa navoakan’ny Mics 2018, iharan’ny herisetra nofo sy fananahana ny 37%-n’ny vehivavy malagasy eo anelanelan’ny 15 taona ka hatramin’ny 49 taona. Na ny fanerena ny vehivavy vady ao an-trano hanao firaisana nofo tsy araka ny nahim-pony aza, efa tafiditra ao anatin’ny herisetra.32%-n’ny vehivavy malagasy kosa no efa miaina anaty herisetra hatramin’ny faha-15 taony. Ao ny herisetra moraly vokatry ny teny mandratra sy ny fandatsana isan-karazany. Ao koa ny herisetra fivelonama ao an-trano mihitsy, ny herisetra vokatry ny fomba fihetsiky ny hafa mety ho ompa na avonavona, ny herisetra fananahana, ny vono…Tatiana AL’article Manjakaray: notokanana ny foibe mikarakara ireo niharan’ny herisetra a été récupéré chez Newsmada.
Mahazaza-Ambohimanga Rova: may ny doany roa fanasinana
May ny doany fanasinana roa lehibe eny Mahazaza Ambohimanga Rova, ny asabotsy teo tokony ho tamin’ny 10ora sy sasany maraina. Hateto tsy fantatra ny nahatonga ny loza, saingy efa misokatra ny fanadihadiana ny raharaha. Tafiditra ao anatin’ny faritra arovana ao Ambohimanga Rova ireo doany roa kilan’ny afo. Avo ny toerana misy an’ireo toeram-panasinana, antony manampy trotraka ny fahamaizana ny rivotra teny an-toerana.“Ny mahagaga dia “couvre-feu”, ny zoma alina teo ary nihiboka tanteraka, ny asabotsy teo. Tsy maintsy hosokafana kosa anefa ny fanadihadiana ny tranga”, hoy ny fanazavan’ny Randriamanantena Elie, tale jeneralin’ny Oscar na ny “office du site culturel d’Ambohimanga Rova. Tsy misy sampana mpamonjy voina ao Ambohimanga ka voatery ireo mpamono afo avy ao Tsaralalana no namonjy ny teny an-toerana. Vokany, efa nirehitra tanteraka ireo doanin-dRatsotsorombolamena sy Andriatsimitoviandrazaka tamin’ny fotoana nahatongavan’ireo sampana mpamonjy voina. Nifanome tanana ireo mponina teny an-toerana tamin’ny famonoana ny afo talohan’ny nahatongavan’ireo mpamonjy voina. “Araka ny fanadihadian’ny zandary, nisy olona nanasina teny an-toerana, ny zoma teo. Noho ny tsy fisian’ny fitaterana, voatery niainga ny asabotsy maraina teo ireo olona teny an-toerana ka tsy novonoiny ny labozia”, hoy ny fanazavan’ny Jly Ravalomanana Richard. Notohizany fa voadidina bararata io toerana io ary mety niitatra tamin’ireo manodidina raha toa ka tsy voavonjy mialoha. Araka ny fantatra, tsy tao an-toerana ny mpiambina ireo doany efatra ao fa nandeha nantsaka. Henintsoa HaniL’article Mahazaza-Ambohimanga Rova: may ny doany roa fanasinana a été récupéré chez Newsmada.
127 ireo matin’ny valanaretina : olona efatra lavon’ny coronavirus
Mbola mampanahy tanteraka. Efatra ireo lavon’ny covid-19, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Teto Analamanga ny telo raha any Boeny kosa ny iray. Tafakatra 127 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity, hatramin’ny volana marsa no ho mankaty.Tena miparitaka ny valanaretinaEtsy an-daniny, miisa 327 ireo nifindran’ny coronavirus ka avy eto Analamanga avokoa ny 272 amin’izany. Manom­boka mihanaka be any amin’ny faritra hafa koa anefa ny covid-19. « Tena efa miparitaka ny valanaretina na aiza na aiza », hoy ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololon­tiana Hanta. Anisan’izany ny any Boeny. Mahatratra 23 ireo tranga vaovao raha 15 ny any Matsiatra Ambony. Miisa sivy ny any Atsimo Andrefana ary samy ahitana tranga vaovao iray avy kosa ny any Vakinan­karatra, Analanjirofo, Atsimo Atsina­nana ary Anosy. Efatra kosa ny any Sava.Miisa 84 ireo marary mafy…Etsy an-daniny, miisa 84 ireo marary mafy ka maro anisa amin’izany ny eto Ana­lamanga, ahitana « forme grave » 67. Mitsinjara ho 39 etsy Befela­tanana raha 12 avy ny eny Anosiala sy HJRA. Efatra kosa ireo marary mafy eny Fenoa­rivo. Manampy ireo ny any Matsiatra Ambony miisa fito raha enina any Boeny ary efatra any Toliary. Na izany aza, miisa 512 ireo sitrana ka tafakatra 9 798 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasahiranana. Miisa 12 222 ireo nifindran’ny valanaretina hatramin’izao raha 2 297 ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny fahasalamany. Tafakatra 45 634 ny totalin’ny fitiliana PCR vita ary miisa 3 178 kosa ny fitiliana Genexpert.Synèse R.L’article 127 ireo matin’ny valanaretina : olona efatra lavon’ny coronavirus a été récupéré chez Newsmada.
Fanatsaran’ny CUA ny tanàna: an-dalam-pahavitana ny zaridaina etsy Ampefiloha
Nitsidika ny fotodrafitrasa hamboarina eto an-dRenivohitra ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina, ny zoma teo. Niara-dia taminy amin’izany reo tompon’andraikitra ambony maro samihafa. Nanao ny fandraisana vonjimaika ny asa nataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra momba ny fanantsarana ny zaridaina etsy Ampefiloha sy ny manodidina izy ireo. Fotodrafitrasa iarahana amin’ireo mpiara- miombon’antoka, toy ny CNaPS sy ny Fiaro izany.Fitsinjovana ny olon-drehetraAnisan’izany ny Solarma, ny Phyto-logique ary ireo maro samihafa. Nambaran’ny talen’ny tanàn-dehibe eo anivon’ny CUA, Randriamanajara Sandrina fa betsaka ny zaridaina, nohatsaraina. « Mbola eo an-dalam-panamboarana izany amin’izao fotoana izao ny kaominina Antananarivo Renivohitra », hoy izy. Tanjona ny hanantsara ny tanàn-dehibe. Tafiditra amin’ny ho fitsinjovana ny olona rehetra, indrindra ireo be antitra efa misotro ronono rahateo ohatra ny zaridaina etsy amin’ny CNaPS, ahitana seza fipetrahana maro.Synèse R.L’article Fanatsaran’ny CUA ny tanàna: an-dalam-pahavitana ny zaridaina etsy Ampefiloha a été récupéré chez Newsmada.